I-Parnope garnet mineral ilunga leqembu le-garnet - ividiyo
Amathegi garnet, I-Pyrope
Thenga i-garnet yemvelo yemvelo esitolo sethu
I-mineral pyrope iyilungu leqembu le-garnet. Yilungu kuphela lomndeni we-garnet ukuthi lihlale libonisa ama-red colouration kumasampula wemvelo, futhi kungenxa yalesi sici ukuthi lithola igama laso esiGrekini ngomlilo nangeso. Yize ingejwayelekile kakhulu kunama garnets amaningi, ayitshe elisetshenziswa kabanzi elinamagama amaningi ahlukile, amanye awo angama-misnom. I-pyrope ye-Chrome, ne-Bohemian garnet amagama amabili ahlukile.
I-pyrope emsulwa yi-Mg3Al2 (SiO4) 3, yize ngokujwayelekile ezinye izinto zikhona okungenani ngezinga elincane — lezi ezinye izinto zifaka iCa, Cr, Fe noM. Itshe lakha uchungechunge lwesixazululo esiqinile nge-almandine futhi u-spessartine, ezihlangene zaziwa njengama garnets e-pyralsset: ipyrope, almandine kanye u-spessartine. I-Iron ne-manganese esikhundleni se-magnesium esakhiweni se-stione. Umphumela, imigoqo yokwakheka ehlanganisiwe ichazwa ngokwayo pyrope-almandine isilinganiso. Itshe eliyigugu rhodolite i-garnet ye-70% pyrope composition.
Umsuka we-pyrope iningi usemadwala e-ultramafic, ngokuvamile abe yi-peridotite evela engubeni yoMhlaba: lezi zinhlaka ezakhiwe ngengubo zingabikwa kuzo zombili izinqubo ze-igneous kanye ne-metamorphic. Ibuye yenzeke emadwaleni e-Ultrahigh-pressure metamorphic, njengase-Dora-Maira massif entshonalanga ne-Alps. Kulelo nani elikhulu, cishe i-pyrope ecwebile yenzeka ngamakristalu acishe abe ngu-12 cm ububanzi; abanye baleyo pyrope ine-inclusions ye-coesite, kanti abanye bane-inclusions ye-enstatite ne-sapphirine.
IPyrope ijwayelekile kuma-xenoliths e-peridotite avela emapayipini e-kimberlite, amanye awo aphethe idayimane. Kutholakala ngokuhambisana nedayimane kuvame ukuba nokuqukethwe kwe-Cr2O3 kwe-3 kuya ku-8%, okunikeza i-violet ehlukanisiwe nokuhlangana okukuhlaza onsomi, kuvame ukuba ne-greenish tinge, futhi ngenxa yalokhu kuvame ukusetshenziselwa amaminerali we-kimberlite inkomba ezindaweni lapho kusebenza khona ukuguguleka. kwenza iphini ekhomba imvelaphi yepayipi inzima. Lezi zinhlobonhlobo zaziwa ngokuthi ama-chrome-pyrope, noma ama-G9 / G10 garnets.
Ukukhonjwa kwegarnet garnet
Ngokucatshangelwa kwesandla, i-pyrope inobuqili kakhulu ukuhlukanisa kusuka ku-almandine, noma kunjalo, kungenzeka ukuthi ibonise amaphutha nokufakelwa okumbalwa. Ezinye izindlela zokuhlukanisa zifakwe kuhlu oluseceleni. Ukunakekelwa kufanele kuthathwe lapho kusetshenziswa lezi zakhiwo njengoba eziningi zalabo ezifakwe ohlwini zinqunywe kusukela kulokho okwakhiwe ngokuhlanzekileyo okwenziwe ngobunyoninco. Ezinye, ezinjengamandla adonsela phansi aphezulu, zingase zingabi nalusizo olutheni lapho kufundwa i-crystal encane efakwe kumatrix wamanye amaminerali abolile. Kulezi zimo, ukuhlangana kwamaminerali namanye amaminerali we-mafic ne-ultramafic kungaba yisibonakaliso esihle kakhulu sokuthi i-garnet oyifundayo i-pyrope.
Esigabeni esincanyana se-petrographic, izici ezihlukanisa kakhulu ze-pyrope yilezo ezabiwe namanye ama-garnets ajwayelekile: ukukhululeka okuphezulu kanye ne-isotropy. Kuvame ukuba nombala oqinile ngokuqinile kunamanye amaminerali aluhlaza asesigabeni esincanyana, yize i-pyrope ingakhombisa umbala ophuzi onsomi ngokunsomi kokukhanya kwendiza. Ukuntuleka kwe-cleavage, i-euhedral crystal morphology, kanye nezinhlangano zamaminerali kufanele futhi kusetshenziswe ekuboneni i-pyrope ngaphansi kwesibonakhulu.
I-Pyrope garnet evela ePailin, eCambodia
Amathegi garnet, Kakhulu
Amathegi garnet, Umbalite
Amathegi Demantoid, garnet
I-Garnet Yokuguqula Umbala
Amathegi Color Guqula, garnet
Ukuhanjiswa Kwamahhala kwanoma imuphi i-oda lama-US $ 100.00 esitolo sethu
I-GEMIC Co., Ltd. / GEMIC Laboratory Co., Ltd. © Copyright 2014-2020, Gem.Agency